यस्तै हुन्छ आजकल
आझ बिहान चाडै निन्द्राले छोड्छ। घरमा सबै जना आफ्नो आफ्नो बिछ्यौनामा बिहानीको मिठो निन्द्रामा मस्त छन्। म भने एक कप चिया हातमा लिएर टिभी हेर्न बैठक कोठा तिर लाग्छु। आजकल टिभीमा पनि कुन गतिलो चिज हेर्न पाईन्छ र? मरेको र मारेको, दुर्घटना र लुटपिट, नारीमाथि श
हिउँभन्दा संग्लो,जूनभन्दा जाती,… हामी हौं कहिल्यै नछुट्ने साथी ... जिन्दगीले मान्छेलाई कहाँकहाँ लादॊरहेछ, यो त समयले बताउनेरहेछ। सायद लेखेको अनि देखेकोमा फरक हुने भनेकै त्यही होला। अचेल समय मसँग निक्कै रोइलो गर्छ र त बेलाबेलामा आफ्नो महत्व झल्काउँछ
अरूलाई पनि हुन्छ कि यस्तो मलाई मात्र होला कुन्नि
अचेल घरि-घरि थोत्रो अतीत ऊतिरै भगाउँछ मलाई। अझै पनि बालापनका सम्झनाले बहकाउँछ मलाई। अरूलाई पनि हुन्छ कि यस्तो मलाई मात्र होला कुन्नि सानो-सानो चोटले पनि आँखाँ झनै रसाउँछ मलाई। आँखा बन्द गरेर घुम्छु मनको आँचलमा कहिलेकाहिँ संसार भरि पाइल
कवि मजगैयाँकाे अनुगुञ्जन सार्वजनिक
कवि उत्तमकृष्ण मजगैयाँकाे अनुगुञ्जन कवितासङ्ग्रह सार्वजनिक भएकाे छ। राजधानीमा भएको एक समारोहमा शास्त्रीय छन्दमा आवद्ध ५१ फुटकर कविताहरूकाे सङ्ग्रह सार्वजनिक गरिएकाे हो। उनको हाँस्यव्यङ्ग निबन्ध, मुक्तलयका कविता र खण्डकाव्यहरूपछिको यो दसाैँ कृति हाे। विविध शीर्षकमा रस, भाव र आनुप्रासिकताकाे
केही नगरीकन। राति गोठमा बत्ती नभएकोले पढ्न पाउँदैनथेँ अनि झ्यालबाट बाहिर हेर्थे। हाम्रो घर गोठ केहि अग्लो ठाँउमा थियो त्यहाँबाट हेर्दा तल धेरै घर धुरीहरू लश्करै देखिन्थे। मैले घण्टौसम्म घरका धुरीहरू हेरेकी थिएँ जूनको उज्यालोमा। बिना कुनै ठोस उद्देश्यले।
सधै जसो चार बज्ने बित्तिकै राजको फोन आउँथ्यो। राज पेसाले डक्टर हो। चार बजेसम्म राज सरकारी हस्पिटलमा व्यस्त हुन्थ्यो। अरु समय ऊ मेडिकलमा हुन्थ्यो। प्राय रातिसम्म पनि उतै बस्थ्याे। उस्लाई सधै जसो भ्याई नभ्याई हुन्थ्यो तर एकछिन् समय पायो कि ऊ मसँग बोल्न हतार &nbs
ख्वाँक्... ख्वाँक.....ख्वाँक खोक्दै हर्कबहादुर घर भित्र पस्छन्। कोठाको एक कुनामा सानो गुडिया समातेर खेलीरहेकी आफ्नी छोरी दिव्यालाई देख्ने वित्तिकै उनको दिनभरिका थकाइ मेटिन्छ। मुहार उज्यालो बनाउँदै छोरीको छेउमा गएर बस्छन्। भर्खर पाँच पुगेर ६ मा लागेक
‘रूबी जस्तो मान्छे’
लोभी गरिबी हुने थिएनन् सृष्टिमा जता ततै रुबी भए पैसाको कुरा के गर्नु मान्छे साँच्चै मान्छे हुन्थे । न पदको अर्थ हुन्थ्यो न अहङ्कारको डकार आउँथ्यो न मानिस बीच सीमाना हुन्थ्यो
थालाजुङको चिया र क्रान्ति!
भूकम्पपछि गाउँ जाँदा बाटोमा गोरखा जिल्ला थालाजुङ गाविस नयाँ बजारमा म र मेरो एकजना आफन्ती एउटा चिया दोकानमा रोकियौं। भित्र करिव १४ वर्षकी नानी थिइन्, गुरूङ जातकी। मैले चिया माग्दा उतातिर फर्किरहिन्। के भयो भनेको माथिल्लो तलाबाट उसको बाउले सोध्योः ‘तपाईँहरू को होला, कुन ठाउँको - जात के पर्‍यो?’
नर्मल भनिएकी गर्भवती र पेटभित्रको बच्चाको मृत्यु
‘नेरोल्याक’मा सर्बोच्चको नजिर : विदेशी ट्रेडमार्क कब्जा गर्ने बाटो बन्द